Ityoophiyaatti guyyaa jalqabaa bara Faranjootaa 2020tti daa’imman kumni 8 fi 493 dhalatan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Ityoophiyaatti guyyaa jalqabaa bara Faranjootaa 2020tti daa’imman kumni 8 fi 493 dhalatan
On Jan 2, 2020 507
Finfinnee, Muddee 23, 2012 (FBC) – Ityoophiyaa keessatti guyyaa jalqabaa bara Faranjootaa 2020tti daa’imman kumni 8 fi 493 dhalachuu Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Fandiin Daa’immanii(UNICEF) beeksiise.
Guyyaa jalqabaa bara Faranjootaa 2020tti addunyaa irratti daa’imman kumni dhibba 3 fi kumni 90 ol dhalachuu ibsameera.
Hindi, Chaayinaa fi Naajeeriyaan biyyoota daa’imman hedduun guyyaa kana keessatti dhalatan ta’uu Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Fandiin Daa’immanii(UNICEF) beeksiisee jira.
Akka ragaan dhaabbatichaa mul’isutti Hinditti daa’imman kumni 67 fi 385, Chaayinaatti daa’imman kumni 46 fi 299, akkasuma Naajeeriiyaatti daa’imman kumni 26 fi 39 guyyaa jalqabaa bara Faranjootaa 2020 aduu tokkotti dhalachuu isaanii ibsameera.
Ityoophiyaattis guyyuma kana daa’immaan kumni 8 fi 493 sa’aa 24 keessatti dhalachuu isaanii ‘UNICEF’ ifoomsee jira.
Daa’imman dhalatanii fi haadholii kanneeniif kunuunsi addaa akka barbaachisu ibsameera.
Bara Faranjootaa 2018tti daa’imman miiliyoonni 2.5 dhibee ittifamuu danda’amuun dhalatanii baatii jalqabaa keessa sababa dhibeen du’uu isaanii dubbatameera.
Kanneen keessa % 33 guyyuma dhalatan sana du’uu isaanii ragaan ifoomee jira.
Haadholii hedduun deessiftuu aadaan waan da’aniif miidhaan ga’u ulfaataa ta’uu ibsameera.
Maddi :- Aljeeziiraa
Maayaa Muur nama akka mana hidhaatii ba’uuf qabsaa’aaf turte Jonaataan…
Namticha tisiisa ari’uutti manasaa walakkaa gube
Obbo Jawaar Mahaammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota…
Dilbata boruu Fulbaana 10, 2013 Finfinnee dameelee…
Kilabiin sababa vaayrasii koroonaaf jecha walirraa fageenya…
Maayaa Muur nama akka mana hidhaatii ba’uuf…
Oduu biyya keessaa2821